simbi nyere wokunze & yomukati rusvingo pena nenyunje muchina - China Qingdao Antai Heavy Industry
Steel nyere pena nenyunje mumuchina zvikuru kushandiswa zvesimbi gridding, simbi chubhu, peturu, makemikari, Magetsi maindasitiri, simbi, guta centralized kudziyisa, centralized abudise etc. Zviri akakodzera rokuchenesa mukati / chokunze pose zvikwepa simbi, bvisa pachikero uye weld mumasese, kuti aratidze simbi ruvara, kuwedzera ayo reshiyo nomumativi weld mumasese, kuti aratidze simbi ruvara, kuwedzera ayo reshiyo pamusoro nharaunda, uye nokudaro dzinobatsira kupenda uye unhani.
Steel Pipe / chubhu yomukati / yokunze Wall bara nenyunje Machine
Steel nyere pena nenyunje muchina unoshandiswa nevakawanda kuti simbi gridding, simbi chubhu, peturu, makemikari, Magetsi maindasitiri, simbi, guta centralized kudziyisa, centralized abudise.
The simbi nyere mukati / yokunze rusvingo chinangwa chinokosha akapfura nenyunje muchina zvakakodzera kuchenesa mukati / chokunze pose zvikwepa simbi, bvisa pachikero uye weld mumasese, kuti aratidze simbi ruvara, kuwedzera ayo reshiyo nomumativi weld mumasese, kuti aratidze simbi ruvara , kuwedzera kwayo reshiyo pamusoro nharaunda, uye nokudaro dzinobatsira kupenda uye unhani.
The Steel Pipe bara nenyunje Machine anoshandisa mukuru-nokukurumidza kwebhosvo kubaya akagura pemvura basa chidimbu rakaoma uye vasiri Urume venhau, uye kuona rokutsvaira chinangwa.
Steel Pipe wokunze rusvingo akapfura nenyunje muchina
The kwokunze / chokunze nepombi pena nenyunje muchina anogona kubviswa kubva oxide scale, nengura nezvimwe sundries kubva nenyere wokunze uye yomukati kuva mugumisiro derusting akanaka, kusvika National mureza SA2-SA3 mu SR / TQ414-98. Inogona uvandudze tensile uye compresive nemishonga yacho nenyere nomumativi kunogonawo nhaka rakavimbika kudzika abrasion muenzaniso, kuti vawane simba adhesion pamusoro unhani pamusoro nenyere pamwe pamusana inogutsa anticorrosion uye therrmal kuputira. Zvichakadai, derusting nokukurumidza inogona kuchinjwa sezvo 1-6m / Maminitsi maererano mhando dzakasiyana.
Steel Pipe Inner rusvingo rokuchenesa Sand nenyunje muchina
muchina uyu adopts hydraulic, yemagetsi impeller musoro kana mhepo kufurirwa the-nenyunje pfuti kubvisa ngura, oxide unhani, nomoto gang kuti munyika pombi kuti pamusoro ngapaonekwe esimbi Sheen, kuwedzera pamusoro nzvimbo. The derusting kunyatsoshanda ndiyo 80-150㎡ / h uye pemvura preparetion pamwero rinosvika 2.5-3. Maererano siyana dhayamita, derusting zvokushandisa munyika pombi inogona equiped pamwe chete-pfuti, kaviri-pfuti, zvina-pfuti, matanhatu-pfuti uye masere nepfuti jecha tangi. Kushandiswa dhayamita siyana: φ48-φ1000.
Steel Pipe Rwomukati Sandblasting muchina anoumbwa mutopota-kutenderera muchina, the-nenyunje trolley, the-nenyunje musoro, the-graying muchina, the-marara mutsetse, specialized trolley nokuti munyika unhani, bhokisi the-rokuunganidza, the separator, guruva-kubvisa maitiro uye uchishandisa papuratifomu, vakawanda mienzaniso kusarudza.
Parameter Cleaning Size (mm) Cleaning Speed ​​(m / Nha) shanda
QGW100 50-300 2-10 Rokunze wall bara nenyunje Machine
QGN100 50-300 1-4 Wall chomukati bara nenyunje Machine
1. Wide chikumbiro, Easy kuisa uye kushandisa.
2. Customized, Meet zvaunoda.
3. Kugadzikana Good, Low kukundikana mwero (zvekushandisa pakunamata, zvekushandisa kwemvura, vashandi vane unyanzvi).
4. Fara chitarisiko (akura craft).
5. mafekitari Large, Kukurumidza pakukurukura.
6. muchinyatsongwarira yepamusoro rokuongorora dhipatimendi.
7. Factory zvakananga kutengesa pamwe zvemakwikwi mutengo.
8. Over 28 Makore 'bara nenyunje muchina patani ruzivo.
9. Professional magadzirirwo chikwata kukushumirai.
10. anonyanya zvemagetsi kudzora mamiriro adoptsinternational muchiso.
11. CE, ISO9001, ISO14000 gwaro chokwadi iwe unhu hwedu.
12. The kudyisa muchina mumutsara ichi ane zvivezwa zhinji. mutsetse Izvi akakodzera senyere vane zvakawanda size.fromФ48 mm kuna Ф1000mm (yomukati). kubva Ф500 mm kuna Ф2500mm (yokunze).
13. The mutsetse wose anowana pasi ruzha uye staffing guruva-nekunhonga michina iri magetsi, musangano hurumende anodiwa kudzivirira zvakatikomberedza.
14. Zviri nyore kupa jecha uye imwe-nguva yakawedzerwa jecha inogona kushandiswa oga nguva.
15. Simple yokugadza, nyore pakufamba uye nyore yokuzvigadzirisa.
16. Easy kushandisa uye nyore kudzidza, otomatiki kudzora uye yakavimbika kuita.
Next: chiredzo mhando akapfura nenyunje muchina
Billet bara nenyunje Machine
Coil & Wire bara nenyunje Machine
Continous Feed O-Ring panhongonya Rail pena nenyunje Machine
Mberi Monorail bara nenyunje Machine
Cylinder pena nenyunje Machines
Door Hook Type pena nenyunje Machine
Hen'a Type pena nenyunje Machine Rupiwe With Hook Or chitakuriso
Multi Table pena nenyunje Machine
Pipe bara nenyunje Machine
Plate bara nenyunje Machine
Rallway bara nenyunje Equipment
Roller Conveyor pena nenyunje Machines
Roller Conveyor Type pena nenyunje Machine
Roller bara Blast Machine
Roller Type bara rikavapo Machine
Michina bara Blast Machine
Michina Table bara rikavapo Machine
Michina Table Type pena rikavapo Machine
Michina Type pena Blast Machine
Akapfura nenyunje For Aluminum vachikanda
Akapfura nenyunje Machine For Mechanical Sector
Akapfura nenyunje Machine With Roller Conveyor
Chakabva Hanger Type pena nenyunje Machine
Steel Rebar bara nenyunje Machine
Strip pena nenyunje Machine
swing Table Kuzvibaya rikavapo Machine
Trolley Michina bara nenyunje Machine
Turntable bara Blast Machine
Turntable Type pena nenyunje Machine
Wire Mesh Belt akapfura rikavapo Machine
Wire Rod bara nenyunje Machine